daadah.com - Cabbeeb – Oral trush
Cabbeeb – Oral trush
Home » Cuddurada » Cabbeeb – Oral trush
Cabeebku waa cuddur ku dhaca inta badan carruurta yar yar. Cuddurkaani wuxuu ku dhacaa qowlalada afka, carrabka iyo saqafka afka. Waxaa keena nooca jeermiga ee la yiraahdo Fungi. Jeermiga fungus ama candida waxaa laga helaa jirkeena isaga oo aan dhib ama jirro noo keenayn. Waxaa laga helaa afka, mindhicirada iyo maqaarka. Haddii difaaca jirku hoos u dhaco ama ilmaha muddo dheer la siiyo daawooyinka Antibiyootiga waxaa dhacda inuu tarmo jeermiga Fungusku, dabadeedna jirro uu ku keeno jirka.
Maxaa keena cabbeebka
Cabbeebka waxaa keena difaaca jirka oo hoos u dhaca. Ilmaha ku dhasha miisaanka yar waxay u nugul yihiin inay qaadaan cabbeebka. Inta badan carruurta yar yari waxay ka qaadaan marka hooyadu umulayso oo ay soo marayaan marinka dhalmada oo uu jeermigu jooggo. Haddii hooyadu qaadanayso daawo anti-biotic ah oo haddana ay naaska nuujinayso ilmaha waxaa laga yaabaa inuu cabbeeb qaado, waayo daawooyinka Antibiyootigu waxay dilaan dhamaan Baakteeriyada xitaa mida saaxiibka la ah jirka oo kantaroosha taranka Funguska cabbeebka keena.
Cuddurkaan hooyada iyo ilmuhu labaduba waa isku gudbin karaan. Haddii hooyada naaskeedu qabo fungus, ilmahu si fudud buu uga qaadayaa. Sidoo kale, haddii ilmaha cabbeebka qabaa naaska hooyadiis nuugo wuxuu ku talaalayaa naaskii hooyada cabbeebkii oo hooyadu naasta ibtiisa waxay ka dareentaa cuncun iyo xannuun.
Calaamadaha lagu garto Cabbeebka
Nabro cad-cad oo kareem ama caano go’ay u eg oo ka soo baxa afka, qowlalada, saqafka afka, bishimaha iyo carrabka.
Xannuun badan weliba marka ilmuhu naaska nuugayo.
appetiteka ilmaha oo hoos u dhaca, xannuunka iyo wax-liqida oo dhibta awgeed.
Sidee loo daaweeyaa cabbeebka?
Marar badan cabbeebku uma baahna daawayn, waayo waxaa suuragal ah inuu muddo labo asbuuc ah iskiis ku baaba’o. Qaar ka mid ah ilmaha wuxuu ku keenaa xannuun badan iyo jahwareer, halka qaar aan la darreemin inay qabaan cabbeebka.
Haddii cunnugu dhib kala kulmo cabbeebka wuxuu u baahan yahay daawayn ee la xiriir dhaqtarkaaga. Waxaa laguu qori karaa daawo la yiraahdo Nystatin oo goojo ah oo afka ilmaha la mariyo. Muddo 10 berri ah mari daawadaas afka ilmaha dhawr jeer maalintii. Haddii hooyadu naaska nuujinayso ilmaha sidoo kale waxay u baahan tahay kareem naasaha la marinayo oo Nystatin ah.